तल्लो मोदीको तत्काल विजुली उत्पादन नहुने ! - Maxon Khabar
Home / News / तल्लो मोदीको तत्काल विजुली उत्पादन नहुने !
तल्लो मोदीको तत्काल विजुली उत्पादन नहुने !
०७६ माघ ११ - काठमाडौं - दुई वर्षअघि नै उत्पादन दिने लक्ष्यसाथ ०६९ असारबाट सुरु भएको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाबाट तत्काल उत्पादन नहुने भएको छ । टनेलभित्र देखिएको समस्याका कारण ०७४ असारभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने भनिए पनि २० मेगावाटको आयोजना उत्पादन मितिबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो । भूकम्प, स्थानीयको अवरोध लगायत कारणले क्षति बेहोरेको आयोजनाले परीक्षणका क्रममा टनेलमै समस्या आएपछि अर्को झन्झटिलो क्षति बेहोरेको छ । सबै काम सकेर परीक्षण उत्पादनका लागि पानी पठाउने क्रममा टनेल चुहिएपछि आयोजना पक्ष मर्मतमा जुटेको छ ।
टनेलको धेरैजसो ठाउँमा पानी चुहिने समस्या समाधान गर्न केही समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयले आयोजनाको टनेल डिजाइनकै क्रममा कमजोरी भएको दाबी गरेका छन् । कम्पनीले अडिट २ को पाँच सय मिटरभित्रको टनेलमा पानी चुहिने समस्या देखिएको बताएको छ । कडा चट्टान क्षेत्रका बीचबीचमा छिद्र रहेका कारण पानी चुहिने समस्या देखिएको प्राविधिकले बताएका छन ।
पानी चुहिने समस्या तत्कालका लागि सामान्य लागे पनि आसपासमा भएका बस्ती र टनेल सँगैको मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा–बागलुङ सडकखण्डमा आइपर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कंक्रिटिङ र ग्राउन्डिङको काम भइरहेको जनाइएको छ । कुस्मा नगरपालिका परादी स्थित पावर हाउसदेखि मोदी गाउँपालिकाको पातीचौरसम्म ४ हजार २ सय मिटर लामो टनेल छ ।